नायक Cummy: सुपर हीरो Hentai ब्राउजर अश्लील खेल
Hentai प्रेरित सुपर हीरो अश्लील खेल
अरे, तपाईं हाँ, तपाईं! प्रयास गर्न चाहनुहुन्छ बाहिर एक anime प्रेरित सुपर हीरो खेल? खैर, कसरी बारे एक हो कि एक सानो अधिक कुनै न कुनै त्यो भन्दा बढी र पूर्ण, पूर्ण-blown hentai मोड? जस्तै आवाज एक निरपेक्ष सपना भने तपाईं हामीलाई सोध्न, र तपाईं गर्नुपर्छ! किन कारण छ किनभने हामी छु उत्पादित नायक Cummy र अब साझेदारी गर्न तयार यो सम्पूर्ण विश्व संग. यो खेल पहिलो थियो envisaged फिर्ता जुलाई मा 2015 को र पछि कहिल्यै, हामी काम गर्नुभएको मा ताजा पैच र बीटा संस्करण सुनिश्चित गर्न प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने एक पूरा, सहज अश्लील गेमिंग अनुभव छ । , हामी विश्वस्त छौं कि प्रेम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ नायक Cummy छौं भनेर धेरै पनि दिन इच्छुक यो दूर चार्ज को पूर्ण मुक्त. यो सही हो – तपाईं तिर्न छैन, एक मुद्रा को आनन्द गर्न यो उत्तेजक शीर्षक छ । It ' s always going मुक्त हुनुपर्छ र हामी विश्वस्त छौं कि प्रशंसक आधार हुनेछ त्यसैले उत्साहित बारेमा हाम्रो रिलीज तिनीहरूले छौँ भनेर हामीलाई समर्थन संग microtransactions एक्लै । चिन्ता नगर्नुहोस्: you don ' t have खरीद गर्न केहि खेल रमाइलो गर्न यहाँ – यो सिर्फ केही वैकल्पिक अतिरिक्त वेशभूषा र NPC कि परिवर्तन बनाउन सक्छ तपाईं बस्ट एक नट बस भनेर सानो बिट सजिलो छ । , अब त, यो कुरा गरौं बारेमा सबै हाम्रो खेल र के तपाईं आशा गर्न सक्छौं पाउन भित्र ।
को परिसर नायक Cummy
परिसर यहाँ छ अपेक्षाकृत सरल व्याख्या गर्न: तपाईं एक बच्चा हुनुहुन्छ भर आएको छ जो केही superpowers र अब तपाईं जाँदै हुनुहुन्छ एक स्कूल लागि भेंट उच्च-स्कूल उमेर व्यक्तिहरूको शेयर यस्तै विशेषताहरु । उद्देश्य को शैक्षिक सुविधा मदत गर्न छ. तपाईं नियन्त्रण आफ्नो शक्तिहरु र कसरी सिक्न अनुशासन आफैलाई लागि बाहिर संसारमा । यो जरूरी एक परिणाम रूपमा कि तपाईं मा फिट ठीक र make the most of your time at the school. स्वाभाविक, यो छ किनभने एक hentai-थीमाधारित खेल, एक धेरै वर्ण तपाईं भर आउन छौँ अविश्वसनीय सेक्सी र देख लागि केही कामुक कार्य । , कुरा जस्तै सुनिन्छ तपाईं मा रुचि हुन सक्छ? त्यसपछि प्राप्त गरौं कुरा के तपाईं हासिल गर्न सक्छन् खेल द्वारा नायक Cummy र चाँडै पर्याप्त, तपाईं गर्न चाहनुहुन्छ छौँ बस्ट आफ्नो नट सबै भन्दा यी सेक्सी schoolgirls who are बस माग्दै आफ्नो कुखुरा! ओह, र हुन तयार भर आउन केही पात्रहरु छन्, जसले कम भन्दा सुन्दर: तिनीहरूले चाहनुहुन्छ बाउंडिने काम आफ्नो शैली छ र यो महत्त्वपूर्ण छ भनेर तपाईं दिन, उपयुक्त मापन प्रतिक्रियाहरू आफ्नो silliness. सबै पछि, तिनीहरूले हुनुहुन्न the ones who are going to end up बलमा गहिरो क्रीम मा स्कूल गरेको sexiness, सही? कम से कम विचार., तिनीहरूलाई मार्न मार्फत fucking गर्म beauty – कि के हामी भन्न!
एक कहानी रमाइलो गर्न
भएकोले यो खेल मुख्यतया तिर geared horny weebs र बकवास प्रेम, हामी यो निर्णय थियो, राम्रो विचार राख्न एक बिट को एक कहानी पछि नायक Cummy त्यसैले तपाईं वास्तवमा यहाँ केहि गर्न पालन र बुझ्न । हामीले मूल्यांकन कि छैन सबैलाई हुन सक्छ मा कि, तर हामी एकदम विश्वस्त छौं यो बाटो अगाडि । देख्न, नायक Cummy हुन अनुमानित छ कि एक खेल तपाईं माध्यम प्रगति बिस्तारै गर्न पूर्णतया बुझ्न जा के । , तपाईं मिल्यो छु एक धेरै निर्णय गर्न बनाउन भर शीर्षक as well, so it 's probablyagood idea to make sure you' re मानसिक लागि तयार कि सबै पढेर बेइमान लाइनहरु! रूपमा हाल कुराहरू मा खडा संस्करण 1.1 हाम्रो खेल छन्, बस over 200,000 शब्दहरू भने संवाद गर्न सक्छन् भन्ने ठेगाना लाग्यो लेगी र माध्यम जान – राम्रो बेइमान प्रभावशाली छ, सही? हामी एक उत्कृष्ट लेखक भनेर गरेको काम गरिएको मा यो खेल र यसको लागि संवाद तीन वर्ष, त्यसैले हामी विचार को परिणाम एकदम विशेष हुनेछ । , स्वाभाविक, you ' ll have बाहिर प्रयास गर्न खेल भने आफैलाई हेर्न को लागि यो गर्न लागिरहेको चोर्न आफ्नो हृदय (र आफ्नो सह), तर हामी इमानदार विश्वास षड्यन्त्र, storylines र पक्ष quests छन् बिल्कुल शानदार छ । Just be prepared to go off the beaten path समय देखि समय: को धेरै छन् कि मिशन मा छैनन् मुख्य ट्रैक छौँ विचार गर्न चाहनुहुन्छ पूरा!
ठूलो ग्राफिक्स र कलाकृति
सामान्य मा-खेल ग्राफिक्स राम्रो हो, तर हामी विचार प्रमुख क्षति गरेको लंड यहाँ मार्फत कलाकृति. हामी गर्नुभएको थियो सबै भन्दा राम्रो टोली एक वरिपरि आफूलाई अर्पण गर्न सिर्जना संसार-वर्ग कलाकृति हुनेछ भन्ने शाब्दिक तपाईंको मन उडा (र आफ्नो लोड). किनभने अश्लील खेल हो बनाइयो यति मा दृश्य तत्व, हामी पक्का गर्न चाहन्थे कि तिनीहरू तयार थिए र raring to go. फलस्वरूप, नायक Cummy छ मा एक प्रमुख स्थिति प्रदान गर्न संसारको संग केही hentai खेल कार्य कि तिनीहरूले बस कहीं अरू फेला हुनेछ., यो एक stellar उत्पादन टीम हामी मिल्यो छु र हाँ: तपाईं चाहनुहुन्छ जा छौं हेर्न यी hentai कलाकृति अपलोड cutscenes र ढिलो होस् बरु पछि भन्दा. There are 35 अद्वितीय NPCs तपाईं गर्न सक्छन् वास्तवमा संलग्न संग यौन प्रयोग हाम्रो पेटेंट सेक्स इन्जिन, प्लस 88 कला कार्ड दृश्य संग धेरै तस्बिरहरू प्रति रिलीज छौँ भनेर अनलक मार्फत विभिन्न चरणमा मा खेल. बस मारा मेनु 'सामग्री' बटन चाहनुहुन्छ भने तपाईं माध्यम जान सबै को उत्तेजक दृष्य: तपाईं जाँदै हुनुहुन्छ एक निरपेक्ष विस्फोट तिनीहरूलाई भने तपाईं प्रेम hentai, पक्का लागि हो!
निर्णयहरू कुरा मा नायक Cummy
यो महत्त्वपूर्ण छ भनेर महसुस गर्न आफ्नो कार्यहरू र निर्णय यहाँ परिणामहरू छ, so don ' t go केहि पनि गरिरहेको बेवकूफ, lest ye no longer have access to some को सबै भन्दा राम्रो भागहरु मा खेल. हामी राम्रो छौं भनेर विश्वस्त प्रेम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ के नायक Cummy सबै बारे छ र हाँ: यो हुन जा गर्नुपर्छ एक निरपेक्ष विस्फोट गर्न लागि पुण रूपमा यो खेल तपाईं महसुस भनेर आफ्नो विकल्प हुनेछ भारी प्रभाव के अर्को हुन्छ. त्यहाँ वरिपरि छन् अद्वितीय 12 अन्त संग केही फरक spins मा प्रत्येक एक – निश्चित लायक माध्यम जा र खोज के विभिन्न विकल्प छन् । , प्लस, यो खेल भन्दा छ 80 उपलब्धिहरू लागि, तपाईं हाल अनलक, प्रत्येक यसको आफ्नै बोनस र लाभ!
त्यसैले, तपाईं सुरु गर्न तयार आफ्नो सुपर हीरो उच्च विद्यालय साहसिक? तपाईं गर्न सक्छन् परिष्कृत आफ्नो विशेष क्षमता र बकवास सबै महिला तपाईं भर आउन? अब पत्ता लगाउन प्रयास गरेर हाम्रो 100% फ्री सेक्स खेल!